Sheekh Shariif oo goordhaw ka hadlay rajada uu ka qabo doorashada berri dhici doonta (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Sheekh Shariif oo goordhaw ka hadlay rajada uu ka qabo doorashada berri dhici doonta (DHAGEYSO)
Madaxweynihii hore ee dowladii KMG ahayd ahna musharax markale u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jaraa’id ku qabtay guriga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay ayaa ka hadlay doorashada madaxweynaha oo maalinta berri dhici doonta.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo shirkiisa jaraa’id marka hore kaga hadlay dareenkiisa ku aadan doorashada maalinta berri dhici doonta ayaa sheegay inuu jiro musuq-maasuq iyo wax isdaba marin badan balse loo baahan yahay in la yareeyo.
“Waxaan jecelnahay in doorashada berri ay noqoto mid xur ah oo ka maran musuq-maasuq, waan ogyahay inuu jiro musuq-maasuq jiro balse waa inuu yaryahay, oo aad loogu dadaalo inta hartay” Sidaas waxaa yiri Sheekh Shariif Sheekh Axmed
Sidoo kale, Sheekh Shariif ayaa tilmaamay in dalka uu haatan u baahan yahay in isbadel dhab ah lagu sameeyo hogaanka haatan ee taladda haya, islamarkaana ay xildhibaanada ka fikiraan shaqsiga ay dooran lahaayeen.
Sheekh Shariif ayaa xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka ugu baaqay inay isaga codkooda siiyaan maadaama uu isaga yahay shaqsi ku haboon inuu xilka qabto.
“Waxaa xildhibaanada ugu baaqayaa inay ka fikiraan shaqsiga ay codkooda siinayaan, islamarkaana ay ka fikiraan ayaaha shacabka Soomaaliyeed, waxaana ka codsanayaa xildhibaanada inay aniga i doortaan, maadaama aan ahay shaqsi u qalma inuu dalka hogaamiyo” Ayuu hadalkiisa raaciyay Sheekh Shariif.